Vungle: Ita mari yako Nharembozha App neIn-App Mavhidhiyo Martech Zone
Vungle: Ita mari yako Nharembozha App neIn-App Mavhidhiyo
Chipiri, February 7, 2017 Chipiri, February 7, 2017 Douglas Karr
Iyo nharembozha nzvimbo inokwikwidza uye mazuva ekugadzira app, kubhadharisa madhora mashoma, uye kutarisira kuwana kudzoka kwako mukudyara iri kumashure kwazvo mumaindasitiri mazhinji. Nekudaro, mukutenga-mu-app uye kushambadzira kwe-mu-app kunoenderera mberi kubatsira kuita mari inoshamisa inodyara iyo mutambo uye nharembozha vanogadzira varikuisa mari.
Sango ndiye mumwe wevatungamiriri mune ino indasitiri, achipa vaparidzi SDK yakasimba yekushambadzira vhidhiyo kushambadzira kuti vaite mari maapps avo, uye ichipa vashambadziri vevhidhiyo mukana unoshamisa wekusvika kune vateereri vemafoni. Vamwe vevatengi vavo vaona kuwedzera kwe10x mukuita mari.
Vashambadziri vanovimba neVungle yekugadzira optimization tekinoroji, kunongedza uye HD vhidhiyo kushambadzira dhizaini kuti usvike uye uwane yepamusoro-kukosha vashandisi pasirese. Vaparidzi vepamusoro vanovimba neVungle kumhanyisa mapikicha evhidhiyo anovandudza ruzivo rwevashandisi, inowedzera kubatanidzwa kwevashandisi uye inounza imwe mari. Vungle inowirirana # 1 yekuyambuka-chikuva mushandisi chengetedzo neindasitiri nhare yekuita indexes.
Vungle yakaunganidza mamirioni maviri nemazana maviri emavhidhiyo anotaridzwa pamakumi makumi maviri emakumi emashandisirwo enharembozha nemaitiro avo akasanganiswa ekushandisa kushambadzira mavhidhiyo mune ruzivo rwevashandisi.
CEO Zain Jaffer akatanga kambani muna 2011 uye akabudirira kuiwedzera pasirese mumakore mashanu chete. Muchokwadi, chakadaro kuvapo kwakakosha muChina (Uye yakakura APAC nharaunda, nokuda kwaizvozvo), uye mabasa pamwe kiyi yokuvaka uye mushambadziri nevadiwa akadai Zynga, EA, Smule, Google, Honda, Allstate, L'oreal, Coca-Cola uye Nissan, Pakati pevamwe.
Vungle inopa vashambadziri nekwanisi yeku:
A / B bvunzo zvisikwa zvako mune chaiyo-nguva mukati memapurogiramu ako.
Vashandisi vanokurumidza kutora matanho avanoda nawo makadhi ekupedzisira anopindirana pane ako mauniti mayunitsi.
Sarudza kuti vashandisi vako vanoona ma ads ne inoshanduka kushambadzira kuiswa.
Nokuburitsa ye-in-app vhidhiyo kune inoenderana application, Vungle inogona kuwedzera imwe nhare mbozha yekushandisa vashandisi uye kuisirwa nekutarisa vateereri vakafanana uye maapps kuburikidza nehurongwa hwekutenga kushambadzira. Vungle inopa zvese kushambadzira kushambadzira uye pamusika wega kuti usvike kune vateereri veprimiyamu mumapurogiramu anopisa.
Dhawunirodha Vungle's SDK
Tags: Androidapuromu-mutambo vhidhiyo kushambadzirayekudyidzana vhidhiyo kushambadziraiosMicrosoftnhare yevhidhiyo kushambadziranharembozha yevhidhiyokuronga kutengapurogiramu vhidhiyoprogrammatic vhidhiyo kushambadza kutengamavhidhiyo kushambadza
Localist: Shambadzira, Gadzirisa uye Simudzira Zviitiko Zvako Pamhepo